I-ikhaya eliyindawo yokuhlala ephelele ibungazwe ngu-Christopher
- Vuka ukuze uthole ukubukwa okuphelele kwe-Ocean & Beach bese uhambahamba wehle uye ogwini.
- Ukuthula nokuthula okunomsindo wolwandle nezinyoni zendabuko kuphela kodwa kuseduze nendawo ehlala eholidini yolwandle e-Sumner.
- Buka ukuphuma kwelanga okumangalisayo phezu kolwandle kuwo wonke ama-engeli.
Ungabe usabheka okunye.
Sicela uze uzophumula endlini yethu entsha sha eklanywe ngokwakhiwa kwe-'Industrial Vibes' Beach House etholakala ngenhla kwetheku.
Indlu entsha sha, enamagumbi amabili okulala yodwa enamafasitela agcwele yonke ebheke ekubukeni okumangalisayo kolwandle nolwandle ngezansi. Itholakala endaweni yayo eyakhiwe egqumeni ngqo ngaphezu kosebe lolwandle enokubukwa okungavinjelwe okungu-180 kwetheku. Jabulela isimo se-surf nesolwandle ngenkathi uphumule kuleli khaya elinesitayela ehlobo.
Jabulela ukubhukuda noma vakashela i-surf echwebeni nje imizuzu emi-2 uhamba ngezinyawo ukusuka endlini noma uhlole i-Godley Head Walk emangalisayo. Dlulela endaweni yeholide yolwandle edumile ye-Sumner imizuzu engu-5 ngemoto futhi ujabulele ukunambitheka kokudla okumnandi nekhofi e-Café's and Restaurants eyimfashini.
Jabulela umoya womlilo wezinkuni ngenkathi ufunda inoveli oyikhonzile noma ubukele imuvi. Igumbi lesibili lokulala liyindawo ebanzi, enophahla oluphezulu. Ukufinyelela kule loft kungesitebhisi esenziwe ngokhuni. Ukuze izihambeli zethu ziphephe, ngeke situse izingane, izinsana noma abantu abadala ukuthi bayigibele.
Kunendawo yokupaka yamahhala yezivakashi endaweni yokupaka izimoto ngaphezu kwendawo. Uzodinga ukuhamba phansi ngaphezu kwezitebhisi eziyi-100 ezibheke ethekwini ukuze ufike endlini usuka endaweni yokupaka izimoto, ugqoke izicathulo zakho ezinethezekile.
5.0(67 okushiwo abanye)
5.0 · 67 okushiwo abanye
Jabulela ukuba senhliziyweni yolwandle oludumile lwase-Christchurch, i-Taylors Mistake. Yitheku elihle elivikelekile elaziwa kakhulu endaweni ngokuntweza, ukubhukuda, ukudoba kanye nokuhambahamba emakhanda. Kuyindawo enokuthula nje phezu kwegquma (5 min drive drive) usuka endaweni eyimfashini engaphansi kweSumner enamakhefi amahle nezindawo zokudlela.
Uma izihambeli zidinga usizo singatholakala ukuze sisize uma kudingeka.